Thwebula .NET Framework 4.8 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: .NET Framework
I-Wikipedia: .NET Framework
.NET Framework – a platform isofthiwe kunesidingo sokuba ukusebenza kwe-software futhi web isicelo esekelwe bokwakha .NET. Isofthiwe kungenziwa zihlukaniswa ukuhambisana anda ne C #, Visual Basic, futhi F izilimi # izinhlelo. .NET Framework isekela anhlobonhlobo technologies zanamuhla futhi izici ezithuthukile ukudala izicelo bayakwazi ukusebenza ezindaweni ezahlukene futhi okusebenza izinhlelo. Isofthiwe iqukethe isisekelo esiqinile ukusebenza eliphezulu Computing kanye debug izicelo level qualitative. .NET Framework isekela umsebenzi ne-Unicode ukuyiqonda nokuyikhumbula sesinesethi ukubethela ubuchule.
Izilimi ezihlukahlukene izinhlelo
Ukuqoqwa idatha zokuxilonga
Isethi ukubethela ubuchule
Thwebula .NET Framework
I-Microsoft Visual C ++ Redistributable – iqoqo lezinto zokwandisa izinto ezisebenzayo nezinhlobonhlobo zekhompyutha. Isoftware iqinisekisa ukusebenza okulungile kwezicelo ezahlukahlukene nemidlalo.
Isofthiwe ukuze bandise amathuba iziphequluli yesimanje kanye web-izicelo. Isofthiwe ihlanganisa okuqukethwe multimedia labhaliwe ku yesikhulumi single isofthiwe.
Ama-Microsoft Security Essentials – isoftware ephelele yokulwa namagciwane evela kuMicrosoft. Unqulo wesi arab kuphela luvikela uhlelo ekulweni namagciwane ezinhlobo ezahlukahlukene, i-spyware, nezinye izinsongo.
I-Microsoft Network Monitor – i-software eqapha futhi ihlaziya umsebenzi wenethiwekhi enhlobonhlobo yamakhono wokuhlunga idatha.
Amazwana ku .NET Framework
.NET Framework software ehlobene
I-Adobe Flash Player – uhlelo lokusebenza oludumile lweziphequluli olunikeza ukudlala kokuqukethwe kwabezindaba ngesikhathi sokuhlala ku-inthanethi. Futhi, isoftware isetshenziselwa ukuthuthukisa okuqukethwe kokuzijabulisa.
I-Adobe AIR – indawo yokwenza izinsiza zewebhu ngaphandle kokusebenzisa isiphequluli. Isoftware isekela umsebenzi wezinhlelo zokusebenza, imidlalo namathuluzi ukwenza ngcono ukusebenza.
Java – ubuchwepheshe bokusebenza okugcwele kwezingxenye ezahlukahlukene kanye nezicelo ezibhalwe ngolimi lwezinhlelo lweJava. Isoftware yandisa kakhulu amathuba esipheqululini kanye nezinhlelo zokusebenza ezisebenza mahhala kunethiwekhi.
Lona umhleli obhalisiwe obhalisiwe osekela amathebhu amaningi ngokuqhathanisa, isihlungi esiphezulu sokusesha kanye nethuluzi lokuhlukunyezwa.
Isipele se-EaseUS Todo – isofthiwe yokusekelayo futhi ubuyisele idatha esimweni esingakulindelanga. Isoftware iyakwazi ukwenza isipele uhlelo ngezilungiselelo zamanje.
Ithuluzi ukucinga kanye ukudlala umculo. Isofthiwe uhlela imitapo umculo bese ungakwazi ukuyifunda kanye nabangani.
Megacubo – isoftware ukubuka ukusakazwa kwethelevishini kusuka emhlabeni wonke. Isoftware ifaka iziteshi eziningi zeTV zamanye amazwe kanye neziteshi zomsakazo zezinhlobo ezahlukahlukene.
I-ImDisk Virtual Disk Driver – isoftware idala ama-disks ebonakalayo ku-RAM futhi ifaka isithombe se-CD noma i-DVD, amadiski e-Floppy kanye namadiski aqinile.